မှာ Avengers ကျောင်းပရဝုဏ်ဖွင့်လှစ်မှုနှင့်အတူ Disney ကယ်လီဖိုးနီးယားစွန့်စားမှု, ငါတို့မကူညီနိုင်ပေမယ့်ဘယ် p စartထိုပြည်၏အချို့သောသူသည်ကြီးသောအမှုတို့ကိုပြုလိမ့်မည် Lego အစုံ။
အောက်ပါ လွှတ်ပေး of Star Wars 75293 ခုခံ I-TS ပို့ဆောင်ရေး, Galaxy ရဲ့ Edge မှာတွေ့ရတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေထဲကတစ်ခုကိုအခြေခံထားတာပါ Disneyမြေနှင့်ဝေါ့ Disney ကမ္ဘာကြီးသည်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်ရသည် Lego အုပ်စုသည်ဆီသို့ ဦး တည်ကြည့်ရှုနိုင်သည် Marvelအနာဂတ်အစုံများအတွက် - တိုးချဲ့
ဘာမျှအတည်ပြုခြင်းနှင့်ဤအတွက်မဆိုသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ် artအမှုန်သည်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုသက်သက်သာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မြေကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည်။ parts ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ် Lego စူပါဟီးရိုးပင်မမှသည်အတွင်းမော်တော်ယာဉ်များစွာအထိမော်ဒယ်များ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, areaရိယာပြီးသားတစ် ဦး ပါရှိပါတယ် Lego အီစတာကွကျဥ.
WEB Slinger ယာဉ်
Avengers Campus တွင်တွေ့ရှိနိုင်သောဆွဲဆောင်မှုအသစ်ကို WEB Slingers: A ဟုခေါ်သည် Spider-Man စွန့်စားမှုနှင့် guests ည့်သည်များသည်ပျက်ကွက်သောစက်ရုပ်အချို့ကိုရပ်တန့်ရန်ကျောင်းဝင်းပတ် ၀ န်းကျင်၌ titular မော်တော်ယာဉ်စီးကြသည်။
သော့ချက် p အဖြစ်art ဆွဲဆောင်မှုနှင့်၎င်း၏ box-like သဘာဝနှင့်အတူကအလွန်ကြီးစွာသောအဘို့အလုပ်လိမ့်မယ် Lego ဆင်တူသတ်မှတ် 75293 ခုခံ I-TS ပို့ဆောင်ရေးနှင့် web-slinging action ကိုတုပရန် stud သေနတ်သမားအနည်းငယ်တွင်အလုပ်လုပ်သောဒီဇိုင်နာများကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။
Avengers ကျောင်းပရဝုဏ် Quinjet
မြေယာ၏လက်ရှိသို့မဟုတ်စီစဉ်ထားသောဆွဲဆောင်မှုများအတွက်အစုတစ်ခုထားခြင်း၏စိတ်ကူးနှင့်အတူဆက်လက်, ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံတိုးချဲ့၏အနာဂတ်ကျောင်းဝင်း၏အဓိက HQ အထက်တွင်ထိုင်သော Avengers '' Quinjet အပေါ် visitors ည့်သည်များသယ်ယူပို့ဆောင်မယ့်စီးနင်းပါဝင်သည်။
အဆိုပါကတည်းက Lego Group သည်ဤစူပါဟီးရိုးမော်တော်ယာဉ်များနှင့်မစိမ်းပါ၊ ၎င်းတို့အပေါ်တွင်အခြေခံထားသည့်နောက်ဆုံးပေါ်စက်ပစ္စည်းပါရှိသည် ၇၆၁၂၆ Avengers Ultimate Quinjetအသင်း၏အဓိကအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူလက်ကမ်းကြော်ငြာ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုကိုင်တွယ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုခုန်ချနေသောဒီဇိုင်နာများကိုစိတ်ကူး။ မရ။
Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ - Mission: Breakout
နည်းပညာပိုင်းအရဤဆွဲဆောင်မှုသည် Avengers ကျောင်းပရဝုဏ်မကြေငြာမီကြာမြင့်စွာတပ်ဆင်ခဲ့သော်လည်း၎င်းမှာဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်art ဒီမြေ၏အနာဂတ်ပုံစံသည်အထူးသဖြင့် in ကြယ်ပွင့်များတွင်သရုပ်ဆောင်ထားသောနတ်မင်းကြီးနှင့်အတူဖြစ်သည် ဗွီဒီယိုဂိမ်းအသစ်.
A Lego ဒီအပန်းဖြေမှုကိုအဓိကအဆောက်အ ဦး ၏အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးအရောင်တောက်ပသောအရောင်များဖြင့်လူအုပ်ကြားတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကအလားတူအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်စိတ်ကူးနိုင်ပါတယ် 10273 သရဲခြောက်တဲ့အိမ် တစ်စက်မျှော်စင်အတွေ့အကြုံကို simulate, ဒါပေမယ့်အချို့နှင့်အတူ Marvel ပတ်လည်အလှဆင်။
← LEGO အတွက်အချိန်တိုသည် Ideas Spider-Man ပြိုင်ပွဲ
LEGO 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတားသည်မည်သည့်စတိုင်နှင့်မဆိုကိုက်ညီနိုင်သည် →